Abakhangisi kumabhulogi wokuhamba | Ukuhamba kwe-Absolut
Ingabe uyinkampani ye- umkhakha wezokuvakasha futhi ufuna ukukhangisa kwi-Intanethi? Ngemuva kwalokho Ukuhamba kwe-Absolut yilokho okufunayo. Inethiwekhi yethu yokuqukethwe ikunikeza ukusekelwa kwekhwalithi ehlukaniswe kakhulu ukuze umkhankaso wakho ube yimpumelelo.
Sinamabhulogi anikezelwe ku:
izingqikithi zokuhamba: ukuhamba ngezindiza, izindiza, izindawo ezinamabhishi nolwandle, njll.
Sisebenza namafomethi amakhulu amabhanela emakethe - i-megabanner, isintshontshi sekhasi, iSky, ... - kanye nazo zonke izinhlobo zamabhanela we-richmedia noma ukuhlanganiswa okuthuthukile. Xhumana nathi ukuthola wonke amathuba namanani wokukhangisa.